Neden Bu Trenler Raydan Çıkıyor? | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်ဘာကြောင့်ဒီရထားတွေပျက်နေတာလဲ
20 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 2
luorlu မှရထားဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်သားဖြစ်သူOğuz Arda Sel နှင့်ဇနီးဟောင်း Hakan Sel တို့ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသော Mssra Öz Sel သည်သူမ၏လူမှုမီဒီယာအကောင့်တွင်ထူးခြားစွာပါဝင်ခဲ့သည်။
မနေ့က Istanbul ရဲ့ Marmaray ကKazlıçeşmeကိုရပ်တန့်လိုက်ပါတယ်။ Gebze လမ်းညွှန်ပျံသန်းမှုများခေတ္တရပ်နားသည်။
Myssra Öz Sel သည်လှည်း၏ဗီဒီယိုကိုKazlıçeşmeမှတ်တိုင်တွင်မျှဝေခဲ့ပြီး“ ဒီရထားတွေကဘာကြောင့်မှားယွင်းနေတာလဲ။ Ray ။
Mssra Öz Sel, မျှဝေမှုတွင်“ ဆက်သွယ်ရေးရထား၊ …ဒီရထားတွေကဘာလို့ရထားလမ်းပေါ်ထွက်လာတာလဲ။ 8 ကျနော်တို့ဒီကိုဇူလိုင်လကတည်းကရှင်းပြဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ကြ! ငါ့ကလေးပြန်မလာဘူး စိုးလ်များမရှိတော့ ပြစ်ဒဏ်ပေးဆောင်ခြင်းနှင့်ပေးဆောင်ဖို့အဖွဲ့အစည်းလျစ်လျူရှုသောသူတို့သည်! တရားစီရင်ရေးအဖွဲ့သည်အားနည်းချက်များကိုတွေ့မြင်ပါစေ။ # trenkazası kul ။
ပြစ်ဒဏ်ပေးဆောင်ခြင်းနှင့်ပေးဆောင်ဖို့အဖွဲ့အစည်းလျစ်လျူရှုသောသူတို့သည်! တရားစီရင်ရေးအဖွဲ့သည်အားနည်းချက်များကိုတွေ့မြင်ပါစေ။ဒ # Trenkaza အဆိုပါ @tcddemiryol အဆိုပါ @uabakanlig https://t.co/CPvuMhqIMR
- ရေလွှမ်းမိုး Misra Oz (@misra_oz) အောက်တိုဘာလ 18, 2019
အဘယ်ကြောင့် Sumela ကျောင်းတိုက်ကေဘယ်လ်ကား structures များမ